Wax macno ah ma taas iPad aad isticmaasho, waxaad hubin in ay dareemaan baahida VLC ciyaaryahanka . VLC ciyaaryahan, taas oo ay taageertaa ugu noocyada file warbaahinta, waxay noqon kartaa app dhab ah oo waxtar leh si ay kaaga caawiyaan in aad la furo warbaahinta kala duwan ee iPad . Laakiin hadii aad rabtid in aad wax ka duwan VLC aad iPad? Waxaa laga yaabaa inaad la caajisaan isticmaalka VLC meel kasta ama laga yaabo in kaliya doonayaan in ay soo raadiyo nolol wacan.
In kastoo VLC la oran karo waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee ku saabsan warbaahinta iPad, dadka isticmaala qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa doonaya inay sahamiyaan ciyaaryahan oo kala duwan la beddelo. Waxaa jira ciyaartoy wanaagsan yar, taas oo loo isticmaali karaa sidii xal kale VLC.
Part1: KM Player
Part3: Style Jukebox
Part4: ON Player
Fiiri KM u Player haddii aad rabto in aad design cusub waxaad u dhici doontaan jeclaaday.
Ciyaaryahanka 1.KM waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ciyaaryahan oo taageera codecs ee telefoonka oo aan dad badan oo kale oo warbaahinta taageero barnaamijyadooda ciyaaryahanka.
2.It uu leeyahay mid ka mid ah interface ugu fiican raadinaya, laakiin waa ay fududahay in la isticmaalo.
3.It bixisaa function dhowr sida function farta gacanta ku xawaaraha iyo sixitaanka dhawaaqa. Waxaa intaa dheer, waxa ay taageertaa shaqada tafatirka u videos iyo wixii la mid ah.
Download URL: https://itunes.apple.com/app/kmpeulleieo/id835776444;
Fiiri ciyaaryahan AV u qaababka ay ka.
1.It ciyaara qaab kasta oo effortlessly waxaa laga yaabaa in ay tahay avi , Xvid, Mp4 ama wmv . Intaa waxaa dheer in ay u shaqayso weyn la HD qaab oo ciyaartoy badan oo aan ku taageeri on ipad
Qaab tayo sare leh taageero 2.It la xallinta 720p iyo 1080p. Waxa ay taageertaa AC3 Dolby daray digital digital iyo Dolby.
3.It sidoo kale diiradda badan oo ku saabsan post processing, tayo sare video processing iyo qaar badan.
URL Download: https://itunes.apple.com/in/app/avplayerhd/id407976815?mt=8
Haddii aad tahay qof lover music ah, aad u jeclaan doonaa Jukebox Style ka.
1.it waa app lacag la'aan ah oo habeeya kartaa oo dhan ururinta music on your iPad
2.you gali kartaa ama ku kaydsan 3000 heeso for free daruurta ku
3.Hi-Fi tayada dhawaqa bixiyaan default
4. qulquli karaan iyo download aad heeso aan xannibaad kasta oo goobta la xiriira
5.It taageeraa oo dhan qaabab weyn ee videos.
Simple iyo xarrago leh, ciyaaryahan OP taagan ee u gaar ah.
1.it taageeraa oo dhan video file iyo music kordhin, laakiin waxa u baahan tahay daydo cusub.
2.You si deg-deg aad u hagaagsan kartaa filimada la Lugood via USB
3. Waxaad gali kartaa filimada la isticmaalayo macmiilka FTP kombiyuutarka sida FileZilla aad.
4.Create kuu gaar ah playlists , oo iyaga wax ka bedel. Intaa waxaa dheer waxaa jira hab play kala duwan, Support laab off / laab dhan / laab on
1.It ciyaari karaa qaabab sida flv, wmv, DAT, vob, mkv, mp4 iyo qaabab kale oo badan oo waaweyn.
2.There dhowr waji hawlaha weyn oo aad u isticmaali karto sida faraha weerar dadban ku kor ama hoos in la beddelo Cinwaan ama midig bidix / in la beddelo wadada audio.
3.It sidoo kale bixiyaan taageero TV, HDMI TV ka baxay iyo Video mirroring
URL Download: https://itunes.apple.com/in/app/goodplayer/id416756729?mt=8
Kuwani waa a kale oo dhowr ah oo aad u wanaagsan VLC. Si kastaba ha ahaatee, waxaa gebi ahaanba ku xiran tahay dadka isticmaala dhadhansiino iyo waayo aragnimo uu ku xukumi ugu wanaagsan ee reer this. Waxaad tijaabin kartaa iyaga dibadda u ah in la ogaado oo waa kan ugu fiican.
Sida loo hagaajiyo iPad Speed
Sida loo sii qulquli Music inay iPad
iPad shawladda kaabta: Sida loo Waraaqda kaabta iPad
> Resource > iPad > Top 5 kale oo ka mid ah VLC u iPad